Abafundi Bezifundo Ngempilo Yasolwandle Bahlomule Ngezindondo Emcimbini Wezokong
Abafundi Bezifundo Ngempilo Yasolwandle Bahlomule Ngezindondo Emcimbini Wezokongiwa KweMvelo Health Sciences
Bendawonye engqungqutheleni (ngenhla kusukela kwesobunxele)uNkz Gemma Gerber, Mnu Gan Moodley, Dkt Deborah Robertson-Andersson noMnu Matthew Coote; (ngezansi) uNkz Bianca Tree (phakathi nendawo) enoMnu Gan Moodley benoDkt Deborah Robertson-Andersson.
Abafundi baselebhu yezeSayensi Yempilo Yasolwandle, Indlelampilo Yasolwandle , Izifundo Ngokongiwa Kwemvelo neSayensi Yenhlaliswanobudlelwane (MACE) eSikoleni Sezifundo NgokuPhilayo bahlonishelwe ikhwalithi yocwaningo lwabo kanye nendlela abalwethule ngayo kuSimpoziyamu Yezokongiwa KweMvelo.
Owenza iziqu ze-Mastazi uNkz Gemma Gerber uwine i-KZN Premier’s Award, kwathi owenza iziqu ze-BSc uMnu Mathew Coote walala isibili esigabeni esifanayo, kanti umfundi owenza iziqu ze-Onazi uNkz Bianca Tree uwine umklomelo ngephosta yakhe.
La ebibanjelwe e-Fern Hill Hotel e-Howick, ihehe abebemele i-MACE, okubalwa nabafundi abayisishiyagalombili abaneziqu, oqeqeshelwa umsebenzi oyendwa kanye nabaluleki babo oDkt Deborah Robertson-Anderson noMnu Gan Moodley. Iqembu lethule izinkulumo eziyi-11, bebethinta izihloko ezifana nokuziphatha kwabatshuzi nokuziphatha koshaka ngenxa yemithetho elawula ezokudoba.
Iqembu laselebhu ye-MACE selihambe ibanga ocwaningweni lopulastiki ( opulastiki abangaphansi kwamamilimitha amahlanu ubugqinsi)nomthelela wabo ezilwaneni zasolwandle lapho bathola ukuba yingxenye yohlelo lukamabonakude i- Carte Blanche kamuva nje.
Opulastiki bebesematheni kusimpoziyamu futhi ilebhu ye-MACE ithole ukunconywa ngendlela abadingide ngayo lenkinga ebeka impilo yasolwandle engozini.
Izinkulumo ezethulwe abasebenzi nabafundi belebhu ye-MACE bezithinta izihloko ezisukela kumazinga amabhakthiriya kuya emiphumeleni yoplastiki ezilwaneni zasolwandle. Iqembu lase-MACE liqhamuke nezisombululo zokubhekana nalezi zimo kanti futhi kwakunomhlangano mayelana nokubhekana nalolu daba kusetshenziswa izinkundla zokuxhumana.
Izinkulumo eziphumelele zihlanganisa eka-Gerber nesihloko esithi-Microplastics in Mussels: What Should the Consumer Know? Ubephenya futhi nangokuthi uyini umthelela wamapulastiki uma egwinywe izimbaza, lokhu bekugqugquzelqa ukubaluleka kwalezi zilwane empilweni yasolwandle futhi njengokudla kwabadobi KwaZulu-Natali.
‘Lolu cwaningo lugcizelela izinga lomthelela wopulastiki ezilwaneni ezisinika ukudla njengabantu futhi lugcizelela isidingo sokucwaningwa kokudluliselwa kobuthi busuka kumapulastiki buya ezimbazeni,’ kusho uGerber.
Inkulumo ka-Coote ibenesihloko esithi: Microplastics Make Fish Anally Retentive! Iphosta ka-Tree ibimayelana nokugwinywa kwamapulastiki yizingungumbane zasolwandle ezingonjiniyela bempilandawonye yasolwandle.
Bonke abafundi bancome abaluleki babo oMnu Moodley no Robertson-Andersson ngokuzinikela kwabo kanye nemibono yabo ocwaningweni nohambo lwabafundi ezifundweni zabo.
‘Ukunqoba lendondo kukhombisa ukuthi ukusebenza kanzima kuyakhokhela,’ kusho u-Tree.
U-Gerber, obuye wabonga u-Coote ngokumelekelela kulo mkhakha, uthe ubemangele futhi ethokozile ngokunikwa le ndondo. Ukuhambela lesimpoziyamu kumnikeze ugqozi ikakhulukazi ukuxhumana nokwabelana ngolwazi nabantu abahlukene. ‘Lokhu kugqugquzele ukuxhumana nokwabelana ngemibono kwabantu abangaphandle kwezocwaningo okukhombise ukubaluleka kokusebenzisana phakathi kwabacwaningi, abashayimthetho nabezemvelo ukuze kuqinisekiswe ukuthi kuyaphilwa futhi nemvelo ivikelelwe izizukulwane ezizayo.